China China kacha ọhụrụ technology zuru akpaka mgbidi putty ngwa agha osisi emepụta na soplaya | MG
Aha ngwaahịa: Ngwa ngwa tile nrapado
Mpaghara ogbako: 800-1200 m2
Achọrọ onye ọrụ: 3-4 Onye
Voltaji: 380V, 415V, 440V ma ọ bụ ahaziri
Ọgwụgwụ ngwaahịa: Ihe nrapado tile, grout tile, putty mgbidi, uwe skim
Ihe onwunwe: Simenti, ájá, ihe mgbakwunye
Ụlọ ọrụ njikwa: PLC njikwa kabinet
Ngwa ngwa tile nrapado
Nkọwa nke MG akpaka tile nrapado ngwa agha
MG usoro tile nrapado na-eme igwe dabeere na ọhụrụ imewe echiche na Europe, a mmepụta adopts na elu kọmputa akpaaka njikwa usoro, onye mmepụta ike iru 30-100 puku tọn kwa afọ dabere na usoro nhazi. The mmepụta ahịrị mejupụtara nchekwa usoro, metering na batching usoro, mbufe usoro, agwakọta usoro, ikuku compressor usoro, nkwakọ usoro, na dedusting usoro, wdg
Ihe osise 3D nke MG akpaka tile nrapado ngwa agha
Atụmatụ nke MG akpaka tile nrapado ngwa agha
1.It atụmatụ ebube ọdịdị, ezi àgwà, elu arụpụtaghị ihe na ezi ngwa agha proportioning.
2. The akọrọ ngwa agha mmepụta akara na-eji a centralized akara usoro, na-eme ka ngwá ọrụ mfe ịrụ ọrụ.
3. Dị ka ụdị nhazi ahụ si dị, enwere ike kewaa ya n'ime ụdị ụlọ elu, ụdị ụlọ elu nke onwe na ụdị usoro. Ọ dị n'akụkụ ụlọ ọrụ ndị ahịa. Mpaghara achọrọ bụ 500 ~ 5000m2.
4. Anyị nwere ike ịnye ọrụ nkwụsịtụ site na imewe na ntinye dịka ihe ndị ahịa anyị chọrọ.
Usoro nka nke MG akpaka tile nrapado ngwa agha
Isi nhazi nke MG akpaka tile nrapado ime igwe
Ngwa nke MG akpaka tile nrapado ngwa agha osisi
The tile nyagide igwe na-eme ka igwe nwere ike na-esonụ na-esonụ akọrọ ngwa agha: bonding ngwa agha: Masonry ngwa agha, mgbidi na ala tile nrapado ngwa agha, anchorage ngwa agha wdg Decoration ngwa agha: ịchọ mma nkedo, n'ime na mpụta mgbidi putty, yi mma ngwa agha wdg. Nchekwa ngwa agha: Mmiri mmiri. - Ngwa agha mgbochi, mgbochi corrosion ngwa agha, ngwa agha na-ebuli onwe ya, eyi ngwa agha mgbochi, mkpuchi mkpuchi ọkụ, ngwa mkpuchi mkpuchi ụda, ngwa nrụzi, ngwa agha mgbochi mmiri, ngwa agha mkpuchi wdg.
Ngwa igwe nkụ nke ájá na MG zuru ezu na-akpachi anya tile nrapado ngwa agha
Ọrụ na-aga nke ọma nke Zhengzhou MG Industrial Co., Ltd
A: Injinia anyị nwere ike chepụta ahịhịa ahịhịa akọrọ dị ka ihe ị chọrọ na mmefu ego gị, itinye ego ụlọ akụ dị iche iche dị iche.
Ikike dị ala dị ala, anyị ga-enye gị ngwọta dị ọnụ ala dị ka ihe achọrọ.
2, Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti zuru akpaka akọrọ ngwa agha osisi na Semi-akpaghị aka akọrọ ngwa agha osisi?
A: (1) Igwe mmiri akọrọ nke ọkara na-akpaghị aka dị ọnụ ala karịa ihe ọkụkụ ahịhịa akọrọ akpaka zuru oke.
(2) Semi-akpaka akọrọ ngwa agha osisi adịghị mkpa iji kwadebe silos mgbe zuru akpaka akọrọ ngwa agha kwadebe ihe silos.
(3) Igwe akọrọ nke ọkara na-akpaghị aka bụ nri akwụkwọ ntuziaka na nha akpaka na nkwakọ ngwaahịa, Ngwa ngwa ngwa akọrọ zuru oke na-enye nri na akpaaka na-atụ na nkwakọ ngwaahịa.
3, Mmadụ ole ka achọrọ ka ọ rụọ ọrụ osisi a kpọrọ nkụ?
A: Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ 2-4 na-eru eru ịrụ ọrụ ngwa ngwa a kpọrọ nkụ.
A: Anyị nwere ike na-enye gị turnkey ngwọta nke akọrọ ngwa agha osisi si arụ ọrụ saịtị na-eme atụmatụ na akọrọ ngwa agha igwe, njem, echichi na ọzụzụ, usoro nke akọrọ ngwa agha, mgbe-sales ọrụ, ndụ oge oru nkwado wdg.
5, Kedu ebe achọrọ maka osisi akọrọ nkụ?
A: Dị ka ike nke akọrọ ngwa agha osisi, ebe chọrọ 300-100 m2.
6, Gịnị bụ mkpokọta ike oriri (KW) nke a akọrọ ngwa agha osisi?
A: Ọ bụ 20-80W dabere na ike nke akọrọ ngwa agha osisi.
7, Gịnị bụ ike nke akọrọ ngwa ngwa osisi gị?
A: Anyị nwere akọrọ ngwa agha osisi na ikike 3-30T / H dị ka gị chọrọ, na anyị nwere ike hazie akọrọ ngwa agha osisi dị ka gị ike chọrọ.
8, Ị nwere ike ịwụnye ihe ọkụkụ akọrọ na obodo m?
9, Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu nke anyị akọrọ ngwa agha osisi, biko zitere anyị ase ma ọ bụ kpọtụrụ anyị ozugbo.
Nke gara aga: 2021 elu arụmọrụ vetikal ụdị kwụsiri ike arụmọrụ Raymond igwe igwe igwe
Osote: 2021 China New Technology Full akpaaka akọrọ ngwa agha Line Production
Osisi Na-emepụta Ngwa Ngwa Ngwakọta Akọrọ
Igwe eji emeputa ihe ọkụkụ akọrọ
Osisi Ngwakọta Ngwakọta akpọnwụ akpọnwụ
Ngwakọta ihe ọkụkụ ahịhịa kpọrọ nkụ
Osisi na-emepụta ngwa agha akọrọ
Osisi Ngwakọta Ngwakọta Akọrọ Akọrịkọbara